Ụzọ 7 ziri ezi DAM nwere ike ịkwalite arụmọrụ ika gị | Martech Zone
Mgbe a bịara n'ịkwakọba na ịhazi ọdịnaya, enwere ọtụtụ azịza n'ebe ahụ — chee echiche njikwa ọdịnaya (usoro njikwa ọdịnaya).CMS) ma ọ bụ ọrụ nnabata faịlụ (dị ka Dropbox). Njikwa Akụrụngwa (DAM) na-arụ ọrụ na ụdị ngwọta ndị a-mana ọ na-ewe ụzọ dị iche iche maka ọdịnaya.
Nhọrọ dị ka Igbe, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, wdg, na-eme ihe dị ka ebe a na-adọba ụgbọala dị mfe maka ikpeazụ, njedebe-ala ihe onwunwe; ha anaghị akwado usoro niile dị elu nke na-abanye n'imepụta, nyochaa na ijikwa akụ ndị ahụ.
N'usoro nke DAM vs CMS - ha bụ usoro dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche n'ofe ụlọ ọrụ ahịa. Ọ bụ ezie na CMS na-enyere gị aka ijikwa ọdịnaya maka weebụsaịtị gị yana akụrụngwa dijitalụ ndị ọzọ dị ka blọọgụ, ibe ọdịda, na microsites, DAM, n'aka nke ọzọ, bụ nke kachasị mma iji jikwaa imepụta ọdịnaya, njikwa na nnyefe n'ofe ndụ ọdịnaya niile yana n'ofe niile. ọwa. DAM na-akwadokwa ụdị akụ dị iche iche, gụnyere vidiyo, 3D, ọdịyo na ụdị ọdịnaya na-apụta, na-eme dị ka isi iyi siri ike nke eziokwu nke ọdịnaya ika gị niile n'ime njem ndị ahịa.
1. Otu ị ga-esi jiri DAM nweta atụmatụ ọdịnaya modular
Site na DAM dị ka ebe nchekwa etiti gị, ị na-enye ohere maka njikwa ọdịnaya gị zuru oke, gụnyere mgbanwe iji gwakọta na dakọtara akụ ọdịnaya n'ofe ụdị, ahịa, mpaghara, ọwa, na ndị ọzọ. Na-agbaji ọdịnaya ka ọ bụrụ ọdịnaya modular pere mpe, nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ - n'ime ngọngọ ọdịnaya, nhazi, na ahụmịhe - na-enye otu egwuregwu ikike na mgbanwe iji rụọ ọrụ nke ọma na iji ọdịnaya akwadoro nke ọma iji wepụta ọdịnaya na-etinye aka, dabara na nke ahaziri onwe ya ngwa ngwa n'ọwa ọ bụla ndị ahịa ha. na-na.
Mgbe ị na-eji a atụmatụ ọdịnaya modular ga-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ọdịnaya ihe n'ime DAM, enwere ụzọ nkwalite metadata dị, dị ka ihe nketa metadata, nke nwere ike inye aka mee ka ọ dị mfe na megharịa akụkụ ụfọdụ nke ịchịkwa ọdịnaya modular.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na DAM nwere ike ịrụ ọrụ dị oke egwu na atụmatụ ọdịnaya modular site n'ịkwado ọdịnaya metụtara njikwa ihe egwu na nrube isi, dị ka nkwupụta, nkwupụta, ụghalaahịa, wdg DAM nwekwara ike ijikwa ọdịnaya iji kwado iwu gburugburu iji, dịka ọmụmaatụ, otu esi eme ya. ọdịnaya kwesịrị ma ọ bụ ekwesịghị iji ma ọ bụ jikọta maka ụfọdụ ndị na-ege ntị, ọwa, ma ọ bụ mpaghara.
N'ikpeazụ, nnukwu uru dị n'inwe ọdịnaya modular niile n'ime DAM bụ na ọ ga-enye gị ohere ịghọta ka esi na ebe a na-eji ọdịnaya ma jiri ya mee ihe ọzọ, na-enye gị nghọta na-arụ ọrụ na arụmọrụ ọdịnaya, kedu ọdịnaya kacha arụ ọrụ maka otu ọrụ, ma ọ bụrụ Ọdịnaya kwesịrị ịgbanwe ma ọ bụ lara ezumike nka, yana ọtụtụ ndị ọzọ.
2. Kedu ka DAM si eme ka nhazi ọdịnaya dị mma
N'ọgbọ dijitalụ nke oge a, ọdịnaya bụ mkparịta ụka nke ụdị na ndị ahịa ha na-enwe. Anyị, dị ka ndị ahịa, na-ahọrọ ika dabere na ahụmahụ anyị na ika ahụ: otú o si mara anyị nke ọma, otú ọ na-eme ka anyị nwee mmetụta, otú ọ na-agbanwe agbanwe mgbe anyị na ya na-emekọ ihe, na otú ọ dị mfe ma dị mkpa na ndụ anyị.
Mana iwepụta ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche na mmekọrịta ọ bụla adịghị mfe ma nwee ike iwepụta akụrụngwa na oge bara uru. Nke ahụ bụ ebe usoro ntọala dịka Aprimo na-abata.
Nhazi nke ọma na-amalite site na mmepụta ihe okike dị mma yana atụmatụ ọdịnaya iji kwado nkeonwe n'ogo. Ọ bụghị naanị Aprimo na-eje ozi dị ka ọkpụkpụ azụ nke ọrụ ọdịnaya gị niile, ijikwa na ịhazi ihe niile dị n'otu n'otu nke mejupụtara ahụmịhe ọdịnaya ọ bụla, mana ọ na-emekwa ka usoro dị ka ọdịnaya modular, ebe ndị otu okike na ọdịnaya nwere ike imepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa, chọta, imekọ ihe ọnụ. , kesaa, na jigharịa ọdịnaya iji mee ka ahụmịhe ndị ahịa na nhazi onwe ha wee kwalite arụmọrụ ka ukwuu.
Njirimara nkeonwe nke Aprimo's Smart Content na-enyere gị aka izipu mkpado nwere metadata na-akpaghị aka na igwe nhazi nkeonwe nke nwere ike dakọtara ọdịnaya na onye ziri ezi, onye ezubere iche. Site na njikọ Salesforce na Aprimo, a na-enye gị ike ka gị na ndị ahịa gị na-emekọrịta ihe n'ofe ọwa, hazie ya na ọgụgụ isi, yana inwe ọdịnaya yana ndị ahịa gị na-ebugharị usoro ịre ahịa ọdịnaya. Na atụmatụ dị ka egosi n'ime ika ndebiri nwere ike wepụta ozi gbasara ndị ahịa na-akpaghị aka, dị ka ozi kọntaktị, iji hazie onwe yana mepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
3. Otu ị ga-esi jiri DAM hụ na nnabata ikuku
Ụlọ ọrụ na-emepụta otutu nke ọdịnaya na ijikwa ihe ize ndụ metụtara ọdịnaya ahụ bụ usoro mgbagwoju anya. Enweghị DAM, a na-agbachikarị ọdịnaya na usoro ọrụ n'ofe ngalaba na ngwaọrụ dị iche iche, na-agbakwunye mgbagwoju anya na ihe ize ndụ na-enweghị isi nke nwere ike ibute nnukwu ntaramahụhụ sitere na ndị na-ahụ maka nhazi. Ịme ka ihe aka ndị ahụ dị mfe na isi njikọ nwere ike ịzọpụta oge na ego na ịbawanye ọsọ na ahịa.
Iji kpuchie ntọala niile, ọkachasị maka ndị na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ pụrụ iche dị ka nkà mmụta sayensị ma ọ bụ ọrụ ego, ị ga-achọ otu isi iyi nke eziokwu iji kwalite ma nlebanya nrube isi na njikwa mkpughe, ihe akaebe, yana ijikwa akụ dijitalụ niile nke ọma. A sị ka e kwuwe, ọdịnaya gị dị mma naanị ka esi enyocha ya, jikwaa ya, nyochaa na chekwaa ya.
Site na ijikọ ike nke Aprimo na teknụzụ ngwọta nnabata, òtù dị iche iche nwere ike ịnapụta usoro zuru oke, njedebe na njedebe nke na-enye ha ohere ịnweta site na akara traceability nke ọdịnaya dị mkpa iji zaghachi ajụjụ nchịkwa, belata ihe ize ndụ nke ụgwọ dị oke ọnụ, ma chebe aha ha - niile mgbe ha na-ebuga ihe pụrụ iche. ahụmahụ na ibelata oge n'ahịa.
4. Olee otú DAM na-enyere aka ika nkwekọ n'ofe asụsụ na mpaghara
O zughị naanị ịnye ọdịnaya n'ụdị na-akwado ya. Ụdị chọkwara ijide n'aka na ekesara ndị ahịa kwesịrị ekwesị ọdịnaya - akụkụ dị mkpa nke - mma ika ahụmahụ.
Nke ahụ pụtara na ụdị dị mkpa iji hụ na ejiri ezigbo akụ na mkpọsa ọ bụla na ọwa, ọkachasị mgbe ị na-atụgharị ọdịnaya n'ofe asụsụ na mpaghara dị iche iche. Nke a bụ ebe ngwọta dị ka ntuziaka ika, ọnụ ụzọ ika, na ndebiri ika na-abịa na aka. Atụmatụ ndị a na-enye ohere ka ndị otu niile, ma nke ime na mpụta (ụlọ ọrụ na-eche echiche ma ọ bụ ndị mmekọ), na-adị mfe na ngwa ngwa budata ntuziaka izi ozi niile akwadoro na nke ọhụrụ, akara ngosi, mkpụrụedemede, akụ na ihe ndị ọzọ nwere njikọ kpọmkwem na DAM gị maka ojiji n'ofe. ọwa, mpaghara na asụsụ. Nke ahụ pụtara na US nwere ike gbanwee ngwa ngwa ngwa ngwa ma nyefee ya n'ahịa UK na-achọghị nkwado okike agbakwunyere.
Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị mechara mkpọsa mmata na US nke nwere nnukwu ihe ịga nke ọma, yana ọtụtụ ndị na-ere ahịa mpaghara chọrọ ugbu a ịme mkpọsa yiri ya. Iji DAM gị, ị nwere ike ime ka ndị otu ahụ nweta ihe niile dị na mkpọsa ahụ na-ama na ndebiri, ọdịnaya, imewe, akara ngosi, eserese, vidiyo, na ihe ndị ọzọ ka akwadoro, dị ọhụrụ na nke zuru oke.
5. Kedu ka DAM si enyere ndị otu okike gị aka
Ọ bụghị naanị na DAM gị nwere ike inye aka na ngbanwe nke ika n'ofe ahịa dị iche iche, mana ọ nwekwara ike inye aka ịzenarị mkpọmkpọ ihe site n'inyeghachi ndị otu okike gị na imepụta oge iji lekwasị anya na ọrụ dị elu.
Site na DAM, ndị otu okike nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa, jikwaa, ma wepụta ọdịnaya site na iji ọba akwụkwọ niile nke akụ modular akwadoro, akara na nnabata. Ha nwekwara ike ịmepụta ndebiri ika maka ndị ọrụ na-abụghị ndị okike ka ha wepụta ọdịnaya maka iji n'ahịa dị iche iche. Ngwọta dị ka Aprimo nwekwara ike mejuputa automation AI na-ebugharị iji wepụta usoro ọrụ okike, imekọ ihe ọnụ, nyocha na nkwenye ka otu ndị ahụ nwee ike itinye uche na ikike ha na oge ha n'ịmepụta ọdịnaya dị elu n'ogo kama ịbụ ndị ọrụ nkịtị.
Nsonaazụ nke ihe ahụ niile bụ nhazi ngalaba na ụlọ ọrụ na otu isi iyi nke eziokwu, oge okirikiri dị mkpụmkpụ, na visibiliti ozugbo n'ime ọdịnaya nke na-arụ ọrụ yana laghachi na mgbalị (NTA) iji mee mkpebi ndị ọzọ gbasara ozi mgbe a bịara n'iwepụta ahụmịhe dijitalụ ahaziri ndị ahịa na-atụ anya ya.
6. Otu esi edozi DAM gị maka ụlọ ọrụ, ndị mmekọ ọwa, ndị nkesa, na ndị ọzọ metụtara nke atọ.
Dị ka ekwuru, kama ebe nchekwa ọdịnaya na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ofe ngwa dị iche iche, Aprimo na-edozi usoro mmepụta ọdịnaya niile, site na okike na nyocha na nkesa na njedebe-niile n'otu ebe. Ọ na-emekwa ka njikwa ọdịnaya gị dị mfe, na-enye gị ohere ịchọta ngwa ngwa, dochie ma ọ bụ dobe ọdịnaya, ma zere oyiri nke otu akụrụngwa.
Nke ahụ pụtara na agaghịzi Dropbox na Google Drive-ọbụlagodi na a bịa n'imekọrịta ndị isi ihe na-abụghị nke nzukọ gị. Site na DAM, ị nwere ike inye ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na ndị na-ekesa ohere iji nweta akụ ha chọrọ, yana ọbụna kesaa ọdịnaya ọhụrụ nke otu ụlọ ọrụ bulitere na nke ọzọ maka iji ọdịnaya ngwa ngwa.
Njirimara dika Netwọk Nnyefe Ọdịnaya Ọha (CDN) njikọ pụtara na ọ bụghị naanị na ị na-ahụ na ọ bụ naanị ụdị ọdịnaya gị kachasị ọhụrụ ka a na-eji, mana ị na-eritekwa uru na oge ibu ngwa ngwa yana ụdị emelitere nke akụ gị na-akpaghị aka n'ebe ọ bụla a na-ebuga ya, dị ka na CMS gị.
Ị nwekwara ike ịnọgide na-enwe nkwekọ n'ụzọ dị mfe ika site n'inye ụkpụrụ ụkpụrụ, ndebiri, na akụ akwadoro maka ụlọ ọrụ iji weghachite ọdịnaya ngwa ngwa, yana njirimara dị ka nhọrọ nbudata dị iche iche na ihe ọkụkụ na-akpaghị aka maka ojiji na ọwa mmekọrịta dị iche iche.
7. Kedu ka DAM ziri ezi si eme CMS-Agnostic Ọdịnaya Ọdịnaya
Ọ bụghị DAM niile ka emepụtara nhata. Ọ bụ ezie na e nwere nyiwe CMS nke na-enye DAM, ọ bụ naanị otu mmewere nke ngwọta ka ukwuu - ikekwe ọbụna ihe ngwọta site na nnweta na nso nso a. DAM ndị a n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ dị ka ebe nchekwa dị mfe maka akụ ikpeazụ na anaghị enye ike, ike, na mgbanwe dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma n'ime gburugburu ebe obibi agwakọta na-aga n'ihu.
N'ime ụwa dijitalụ dị mgbagwoju anya taa, ọ gaghị ekwe omume maka ụdị ụdị iji otu onye na-ere ahịa hazie nke ọma maka nchịkọta omnichannel ha niile. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ DAM, ị kwesịrị ị na-achọ ngwọta nke bụ CMS-agnostic ma nwee ike ije ozi dị ka engine ọdịnaya zuru ụwa ọnụ gị na ntinye n'ofe otutu ngwọta ala. Site na DAM kacha mma, ị nwere ike gosipụta n'ihu nzukọ gị na nnwere onwe imelite azụmahịa gị ka ọ bụrụ ọwa ọhụrụ, site na ntinye aka na nke mepere emepe.
DAM gị kwesịrị inwe ike ijere mkpa omnichannel n'ofe CMS ọ bụla, ọtụtụ CMS dị na ya, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọwa ọ bụla na nhazi gburugburu ebe obibi. Ọ na-aghọ injin ọdịnaya zuru ụwa ọnụ, n'adabereghị na mgbanwe ọ bụla ị na-eme na CMS gị n'okporo ụzọ. Kama ịdabere na ngwaọrụ mmachi nke na-ejikarị "na-ekwurịta okwu" ibe ya, DAM nwere onwe ya, nke e wuru na nhazi ọdịnaya nwere ike ịmekọrịta, na-enye gị ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa n'ime usoro gburugburu ebe obibi dị iche iche ka ị nwee ike mee ka oge na-aga ahịa na ntughari. , ma weghara usoro ị na-ebuga ika gị n'ihu.
Ọnwụnwa Aprimo DAM efu
Tags: aiaprimoAmamịghe echichenjikwa arịa mmụta egoaudioBoxbrandika nnabataakara akaracdnCMScms-agnosticnnabatanyocha nnabatateknụzụ ngwọta nnabataComablecomposable ijenetwọk nnyefe ọdịnayaarụmọrụ ọdịnayanhazi ọdịnayaatụmatụ ọdịnayaakara ọdịnayaụdị ọdịnayamepụta ọdịnayaìgwè ndị okikedamdam maka ụlọ ọrụdam maka ndị mmekọ ọwadam maka ndị nkesadam vs cmsnyefee ọdịnayanjikwa ihe onwunwe dijitalụnjikwa ngosiDropboxnjikwa akụ obodoGoogle mbanyenkà mmụta sayensịjikwaa ọdịnayaatụmatụ ọdịnaya modularotutu asụsụkeonwelaghachi na mgbalịntụgharị ucheegosi
Jetpack: Otu esi edekọ ma lelee nchekwa nchekwa zuru oke na ndekọ ọrụ maka saịtị WordPress gị